Chipangizo Chakanaka Chinokubvumira Kuona Mafirimu Matsva Uye TV Pasina Kubhadharwa Kwemwedzi?
NeVokupedzisira TV yava kutengeswa munyika yose, iyi ndiyo mhinduro huru yekuona mafirimu ako aunoda uye zviratidzo zvekusununguka!
Isu tose tinoziva kushungurudzika kwezvipfeko zvebhadhiro uye mabhizinesi ekubhadhara anogona kuva.
Iwe unobhadhara kadhi, Netflix, mafirimu nemitambo pazvinoda ... zvinowedzera.
Uye zvechokwadi pane zvose izvi hardware. Mucherechedzi wako, AppleTV kana Firesticks, DVD Player uye kazhinji anobhadhara Smart TVs.
Saka hazviuye sechishamisika kuti vakawanda uye vakawanda vari kutsvaga mari shoma, nzira dzakadzika dzekutema michina yemabhadhi uye kubvisa zvinhu zvose.
Ndinofara, pane mhinduro yekuona zviri pamutemo chero chinhu nokuda kwekusununguka!
Imwe nyanzvi yekuAmerica yakatanga kuUnited States yakauya nedhigadget itsva itsva uye isingadhuri inoshandura nzira iyo vanhu vanodya mhizha.
Inonzi Wokupedzisira TV . Ndiyo-state-of-the-art Home Theatre box iyo inogona kushandiswa nyore nyore kune chero terevhizheni. Iyo inouya nezvose zvakasimbiswa uye iri kumusoro uye inoshanda mukati memaminitsi. Kwete teknolojia inoziva-inodiwa sei.
ekupedzisira tv box
Iyo yose-in-one varaidzo yekuvaraidza iyo inokubvumira kuti ubvise pane imwe yehutori yako yese uye remotes. Zvose zvese zvatinoziva zvinotanga kushandiswa sekunge iwe unogona kuzviziva kubva kumiti yakadai seAppleTV, Amazon Firestick nezvimwe. Asi pane kusiyana kukuru - kunokubvumira kutarisa chero chinhu pasina. Pasina mabhadharo uye zvakakwana pamutemo.
Zviri nyore! Ingoshamwaridzana neIndaneti yeTV uye chero terevhizheni yaunayo. Tsamba dzose dzinowanikwa muhomwe. Dhinda bhodhi ye simba uye ita. Kwete zvakakosha, zvinotora minima gumi uye iwe unokwanisa kutarisa chero chaunoda.
Pakupedzisira TV yakanyatsorongedzerwa uye yakarongedza zvakare saka inoshanda kunyange nyore. Iyo Yepamusoro yeTV teknolojia inotsvaga intaneti iyo ichawana uye inoputika, zvinenge chero mhezheni ye terevhizheni, hollywood movie, kana mutevedzeri wemitambo inogara uchida kutarisa usingatyi kunetseka pamusoro pokubhadhara mari yekubhadhara kana kubhadhara kwemwedzi mumwe nomumwe.
"Chigadzirwa ichi chakandichengetedza matani emari!"
Iwe unogona kutonhora mumuterevhizheni uripo 24/7 kusanganisira zvese nzira dzaunowana kubva kune kambani yekambani yekambani nemamwe mazana kubva munyika yose. Chero Ultra Ultra HD yechokwadi.
Izvo zvinonzwika kuva zvakanaka kuti ichokwadi ndeyechokwadi, hapana zvidzidzo zvakabatanidzwa. Zvechokwadi unofanirwa kuve nekutengesa uye izvo zvishoma zvishoma pamwedzi. Asi iwe haunazvo zvakadaro? Uye pamusoro pekutakura uye nguva dzenguva. Ikupedzisira TV inongogadziridza kunongedzera ku internet yako inotarisa kuitira kuti mhando dzose dzehupenyu dzigone kuongororwa pakarepo. Kana Youtube inoshandisa Ultimate TV ichashanda zvakare.
NeVokupedzisira TV iwe uchawana rugare rwepfungwa, uchiziva kuti unokwanisa kuona maonero ako aunoda.
Asi zvinotenderwa here?
EHE! Zvechokwadi. Zvinonyatsotongerwa kushandiswa sezvausina kuchengetedza zvinyorwa zvichitsvaga. Ndiyo chinhu chikuru pamusoro payo.
Zvechokwadi makambani emakambani haafari nemamiriro ezvinhu saka vari kuedza kumisa Ultimate TV kubva kuitengesa iyo kuvanhu. Saka inogona kudzoka-yakarongeka munguva pfupi, asi kana uchangobva kune imwe iwe wakanyatsonaka uye uchakwanisa kutarisa zvinhu zvose pasina rusununguko nekusingaperi - zvakakwana pamutemo.
Ndezvipi Zvakazoita Kuti Nditengere?
purogiramu yakanakisa yekugadzirisa inotora mutambo
Iwe unenge uchifunga kuti chigadzirwa ichi chinodhura zvikuru ... Nhema! Pakupedzisira TV iri kutamba kutenga 1 kuwana 1 FREE offer! Rimwe nguva kubhadhara - kwete kubhadhara, hapana mari yemwedzi. Itarise!
Ndekupi kwandingatenga imwe?
Unogona kuzvitenga zvakananga kubva kune webhusaiti yekambani nekudhonza pano .
tarisa terevhizheni pasina
Cherechedza: Sezvakakosha zvikuru, vanhu vari kutenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana panguva imwechete sezvo vachida kuzvitengesa pamutengo wepamusoro gare gare. Ndapota bvumira mavhiki masere kutumira.
Pakupedzisira TV inogona kushandiswa iyo mune imwe nyika yenyika.
Tanga kutarisa chero zvese pasina ...
Iye zvino zvawakanyatsoudzwa pamusoro peizvi zvinyorwa zvinoshamisa, rega ndikuratidze kuti zviri nyore sei kuisa. Zvose zvaunoda kuita ndekutevera matanho matatu:
Danho 1: Raira Ikupedzisira TV mazuva ano kuti uwane zvinotengeswa ne40% OFF.
Nhanho 2: Paunogamuchira, shandisa purogiramu yacho uye uiunyore kune chero terevhizheni yaunoda nematafura akabatanidzwa uye shandisa bhodhi re simba. Pakupedzisira TV inobvunza pamusoro pechiyi chako che wi-fi. Zviise mukati uye iwe wakagadzirira kuenda.
Danho rechitatu: Tarisa chero chinhu chesununguko ... Pakupedzisira TV ichakurumidza kukuratidza blockbuster kana kuratidzwa kwakakurumbira, uye iwe unogona kugara uchitsvaga chero chinhu uye wotarisa pakarepo.
Heino chidimbu: Ikupedzisira TV chipo chikuru nokuti chichaponesa munhu wose, anoigamuchira, tani yemari!
Sezvo vanhu vazhinji vanotenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kamwe chete kuitira kuti vadzoke zvakare! Saka ndapota tendera mavhiki masere kutumira. "